I-Tokio Blues: "ukuhlolwa" okufaka umsebenzi kaHaruki Murakami | Izincwadi Zamanje
ITokyo Blues (1987) yinoveli yesihlanu yombhali waseJapan uHaruki Murakami. Ngesikhathi sokukhishwa kwayo, umbhali waseJapan wayengeyena umfokazi emhlabeni wokushicilela futhi wayekhombise isitayela esihlukile ezincwadini zakhe zangaphambilini. Ngaphezu kwalokho, yena uqobo wacabanga ngalo mbhalo njengohlobo oluthile lokuzama inhloso yalo kwakuwukuhlola izingqinamba ezijulile ngendlela elula.
Umphumela waba indaba ekwazi ukuxhumana nabantu bayo yonke iminyaka, ikakhulukazi ngezethameli ezisencane. Eqinisweni, amakhophi angaphezu kwezigidi ezine ITokyo Blues. Ngakho-ke, yaba yisihloko sokungcweliswa kombhali waseJapan, osezuze imiklomelo eminingi kusukela lapho. Ngaphezu kwalokho, igama lakhe liyaqhubeka nokuba yilungu leNobel Prize in Literature.
1 Ukubuka konke kweTokyo Blues
1.2 Ubungani nenhlekelele
1.3 Ukuhlangana kabusha
3 Imishwana eyishumi ye-Tokyo blues
4 Mayelana nomlobi, uHaruki Murakami
4.1 Isingeniso sombhali wesikhathi esizayo
4.2 Ukukhuphuka kombhali othengisa kakhulu
5 Izici zesitayela kanye nomqondo wezincwadi zikaHaruki Murakami
5.1 Ukuqagela, ubuqiniso bomlingo, i-oneirism ... noma ingxube yazo zonke?
5.3 Kungani ukulandisa kukaMurakamian kuveza inzondo engaka?
6 Izincwadi zikaMurakami ezi-5 ezithengiswa kakhulu
Isifinyezo se- ITokyo Blues
Ukuqala kwencwadi yethula UToru Watanabe, owesilisa oneminyaka engu-37 obanjwe ebhanoyini (elihlala phansi) nini lalela ingoma ekhethekile. Leyo ngcezu - "Izinkuni zaseNorway", yiqembu lesiNgisi elidumile iThe Beatles— kumvusa abaningi izinkumbulo zobusha bakhe (kusukela ngesikhathi sakhe njengomfundi waseyunivesithi).
Ngaleyo ndlela, le ndaba idlulela edolobheni laseTokyo ngawo-1960. Ngaleso sikhathi, izehlakalo eziphazamisayo zenzeka emhlabeni wonke ngenxa yempi ebandayo nemizabalazo eyahlukahlukene yezenhlalo. Okwamanje, UWatanabe utshela imininingwane ngokuhlala kwakhe enhlokodolobha IsiJapane esinemizwa ethintekayo yokungazethembi nesizungu.
Njengoba indaba iqhubeka, i-protagonist iyakhumbula imininingwane mayelana ne- okuhlangenwe nakho kweyunivesithi, ulalele muphi umculo nobuntu obungajwayelekile babanye ozakwabo. Ngokufanayo, uWatanabe isho ngokushesha kubathandi bakhe kanye nokuhlangenwe nakho kwabo kwezocansi. Ngokulandelayo, uveza uthando ayenalo ngoKizuki, umngane wakhe omkhulu kusukela ebusheni, noNaoko, intombi yakhe.
Ngaleyo ndlela, kudlula impilo ejwayelekile yansuku zonke (umuzwa obangelwa ulimi olulula nolusondele lokulandisa ...). kuze kube kuvela usizi empilweni futhi kumaka ingqondo yabalingiswa unomphela: UKizuki uzibulala. Emzameni wakho wokunqoba ukulahlekelwa okubi, UToru unquma ukusuka eNaoko unyaka wonke.
UNaoko noToru baphinde bahlangana eyunivesithi ngemuva kwesikhathi sokuhlukaniswa kwe-protagonist. A) Yebo, kwaqhamuka ubungani beqiniso obanikeza ithuba lokuheha ngokungenakugwenywa. Kepha, usakhombisa izimpawu zokuthamba kwengqondo, ngakho-ke, kwakudingeka abhekane nobunzima besikhathi esedlule. Ngale ndlela, le ntokazi yamukelwa esikhungweni sokusizwa ngokwengqondo nokuphumula.
Ukuzifihla kukaNaoko kwandise umuzwa kaWatanabe wokuba nesizungu, ngenxa yalesi sizathu, waqala ukukhombisa izimpawu zokungahambi kahle. Kamuva, wayecabanga ukuthi uthandana noMidori, enye intombazane ekhonze ukunciphisa izinsizi zayo okwesikhashana. Ngemuva kwalokho, UToru wagcwala inkanuko yothando, ubulili nokungazinzi umuzwa ongokomzwelo ubhajwe phakathi kwabesifazane ababili.
Ukuthuthuka kwemicimbi kududula umlingiswa ophikisayo ohlotsheni lokucabanga okujulile ngobukhulu obufana nephupho. Kulesi simo, akunakwenzeka ukuhlukanisa ngokusobala ukuthi yimaphi amaqiniso noma izinto eziyiqiniso nokuthi yiziphi ezicatshangelwayo. Ekugcineni, ukuzinza okufiswayo kungenzeka kuphela lapho i-protagonist ikwazi ukuvuthwa ngaphakathi.
I-Tokyo blues, ngamazwi kaMurakami
Enkulumweni ne El País (2007) waseSpain, Kuchaza uMurakami maqondana ne- "experiment" ITokyo Blues, Okulandelayo: "Anginantshisekelo yokubhala amanoveli amade anesitayela esingokoqobo, kodwa nginqume ukuthi, uma kube kanye kuphela, ngizobhala inoveli eyiqiniso. Umbhali waseJapan wengeze ngokuthi akajwayele ukufunda izincwadi zakhe ngemuva kokuthi zishicilelwe, ngoba akanakho okunamathiselwe ezindabeni zesikhathi esedlule.
Kamuva, engxoxweni eyayiqhutshwa nguXavier Ayén (2014), uMurakami wachaza ukusondelana kwakhe nabalingiswa abanezinkinga zengqondo. Ngokuphathelene nalokhu, wathi: “Sonke sinezinhlobo zethu zezinkinga zengqondo, kwesinye isikhathi esingazigcina singaqapheli, ngaphandle kokuvela ngaphezulu. Kepha sonke siyizihambi, sonke siyahlanya kancane ”...
Imishwana eyishumi ye I-Tokyo blues
"Uma uzungezwe ubumnyama, okuwukuphela kwento ukuhlala unganyakazi uze amehlo akho ajwayele ubumnyama."
"Okwenza sibe ngabantu abajwayelekile ukwazi ukuthi asijwayelekile."
"Ungazidabukeli. Abantu abancane kuphela abenza lokho ”.
"Uma ngifunda ngokufana nezinye, ngangizogcina sengicabanga njengabo."
"Ukufa akuphikisani nokuphila, ukufa kufakiwe empilweni yethu."
“Akekho umuntu othanda isizungu. Kodwa anginantshisekelo yokwenza abangane nganoma iyiphi imali ”.
"Akukho yini emzimbeni wami uhlobo lwenkumbulo lapho zonke izinkumbulo ezibucayi zihlangana bese ziphenduka udaka?"
"Lokho kwenzeka kuwe ngoba kunika isithombe sokuthi awunandaba nokuthanda abanye."
"Indoda efunde kathathu IGatsby Enkulu kungahle kube ngumngani wami ”.
"Abadabukisayo babekhala noma bahlebe, kuya ngokuthi umoya ubhoka ngakuphi."
Mayelana nomlobi, uHaruki Murakami
Umbhali waseJapan owaziwa kakhulu emhlabeni namuhla wazalelwa eKyoto ngoJanuwari 12, 1949. Ungowenzalo yendela yamaBuddha kanye nengane okuyiyo yodwa. Abazali bakhe, uMiyuki noChiaki Murakami, babengothisha beZincwadi. Ngalesi sizathu, uHaruki omncane wakhula ezungezwe imvelo yamasiko, enezincwadi eziningi ezivela ezingxenyeni ezihlukene zomhlaba (zihlangene nezaseJapane).
Ngokufanayo, umculo we-Anglo-Saxon wawuyinkinga evamile emndenini wakwaMurakami. Ngokwezinga lokuthi ithonya lomculo nemibhalo yamazwe aseNtshonalanga luphawu lokubhala kukaMurakamian. Kamuva, insizwa Haruki ukhethe ukufundela imidlalo yeshashalazi neyesiGreki eWaseda University, enye yezindawo ezihlonishwa kakhulu eJapane. Lapho wahlangana nobani namuhla ongumkakhe, uYoko.
Isingeniso sombhali wesikhathi esizayo
Ngesikhathi sakhe njengomfundi waseyunivesithi, UMurakami ubesebenza esitolo somculo (samarekhodi e-vinyl) nasezindaweni zokucima ukoma ze-jazz "Uhlobo lomculo aluthandayo." Kulokho kunambitheka kwavela ukuthi ngo-1974 (kwaze kwaba ngu-1981) wanquma ukuqasha indawo ukuze asungule i-jazz bar kanye nonkosikazi wakhe; bambhabhathiza "Peter Cat." Lezi zithandani zinqume ukungabi nazingane ngenxa yokungasethembi isizukulwane esizayo.
Ukukhuphuka kombhali othengisa kakhulu
Ngo-1978, uHaruki Murakami wakhulelwa umqondo we ube ngumbhali ngesikhathi somdlalo we-baseball. Ngonyaka olandelayo waphonsa Yizwa ingoma yomoya (1979), inoveli yakhe yokuqala. Kusukela kuleyo minyaka emihlanu, umbhali waseJapan ubelokhu enza izindaba ezinabalingiswa abamangazayo ezimweni ezithile eziphazamisayo.
UMurakami wayehlala e-United States phakathi kuka-1986 no-1995. Okwamanje, ukwethulwa kwe- Izinkuni zaseNorway —Esinye isihloko sesihloko esithi ITokyo Blues- umake ukusuka emsebenzini wakhe wokubhala. Yize izindaba zakhe zinconywe yizigidi zabalandeli kumazwekazi amahlanu, akazange akhululwe ekugxekweni okuqinile.
Izici zesitayela kanye nomqondo wezincwadi zikaHaruki Murakami
Ukuqagela, ubuqiniso bomlingo, i-oneirism ... noma ingxube yazo zonke?
Umsebenzi womlobi ovela ezweni lokuphuma kwelanga awushiyi muntu ongenandaba. Noma ngabe bangabagxeki bemibhalo, abahlaziyi bezemfundo noma abafundi, ukucabanga kwendawo yonke yaseMurakamian kuvusa ukubabaza okukhulu noma inzondo engavamile. Lokho wukuthi, kubonakala ngathi awekho amaphuzu aphakathi lapho kuhlolisiswa umsebenzi kaMurakami. Kungani lokhu (pre) kwahlulelwa kufanele?
Ngakolunye uhlangothi, UMurakami ukhulelwa ukubhala ngenhloso yokuthi weqa umqondo, ngenxa yokuzibophezela kwakhe okungenakuphikwa kumhlaba wamaphupho. Ngenxa yalokho, amasethingi angavamile enziwe amaJapan asondela kakhulu ekulandiseni okungokoqobo. Ngaphezu kwalokho, i-aesthetics, ezinye izinhlamvu nezinsizakusebenza zemibhalo gcina uzokwenza ukufana ngezimo ze ubuqiniso bomlingo.
I-fantasy, i-atmospheres efana nephupho, nama-universal afanayo yizinto ezivamile ngaphakathi kokulandisa kukaMurakami.. Kodwa-ke, akulula ukukuchaza ngaphakathi kwamanje othize, ngoba ezindabeni zabo imvelo nesikhathi kuvame ukuvela noma kuhlanekezelwe. Lokhu kuguquka kweqiniso kungenzeka ezimeni zokukhohlisa noma ngaphakathi kwezingqondo zabalingiswa.
Kungani ukulandisa kukaMurakamian kuveza inzondo engaka?
UMurakami, njengabanye abantu abathengisa kakhulu - uDan Brown noma uPaulo Coelho, isibonelo-, usolwe "ngokuphindaphinda ngabalingiswa bakhe namarekhodi akhe." Ngokwengeziwe, abaphikisi bezincwadi zase-Asia baveza ukuthi ukungabikho okuphindaphindiwe kwemikhawulo phakathi kokucabanga nokwangempela kugcina kudideka (ngokungadingekile?) Umfundi.
Nokho, amaphutha amaningi kaMurakami abonwa njengobuhle obukhulu ngamabutho wabalandeli namazwi avumelana nendlela yakhe yasekuqaleni yokuxoxa izindaba. Zonke izici ezishiwo maqondana nokulandisa okulayishwe ngezinto ze-surreal, ezifana nephupho nezinganekwane nazo ziyabonakala ku ITokyo Blues.
Izincwadi zikaMurakami ezi-5 ezithengiswa kakhulu
ITokyo Blues (1987)
Umlando wenyoni evunguza umhlaba (1997)
Sputnik, sithandwa sami (1999)
Kafka ogwini (2002)
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Novela » ITokyo Blues